एसएमईमा आक्रामक ढंगले लगानी विस्तार गर्छौं
रमेशराज अर्याल कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
विगतमा मर्जर भएर पनि खासै पर्फर्मेन्स सुधार गर्न नसकेका संस्थाहरूलाई गाभ्न लाग्नुभएको छ । किन त्यस्ता संस्था रोज्नुभयो ?
पहिलो कुरा, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चुक्ता पूँजी वृद्धिको योजना ल्याउन ल्याउन निर्देशन दियो । साथै, अहिले हाम्रो बैङ्कको सञ्चालक समितिमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रतिनिधिहरू छन् । राष्ट्र बैङ्कले उहाँहरूलाई दिएको कार्ययोजना (टीओआर)मा यस संस्थाको शेयर स्वामित्व विविधीकरण गर्ने भन्ने छ । यी दुई कारणले बैङ्क मर्जरमा जानुपर्ने अवस्था भएको हो । पूँजी वृद्धिका लागि मात्र मर्जमा जाने तयारी भएको होइन ।
हामीले क वर्गको वाणिज्य बैङ्कसँगै पनि मर्जरमा जान धेरै प्रयास गरेका हौं । तर, भदौ मसान्तमा जसरी पनि पूँजी योजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने र त्यसो गर्न नसके नियामकबाट कारबाही भोग्नुपर्ने अवस्था आएपछि विकास बैङ्हरूसँग मर्जरमा जाने निर्णय भएको हो । उहाँ (साझेदार बैङ्क)हरू पनि इच्छुक हुनुभएकाले यो सम्भव भएको हो ।
पूँजी योजना बनाउने र पेश गर्ने हतारले विकास बैङ्क रोजियो भन्न खोज्नुभएको हो ?
पूँजी योजना पेश गर्ने पनि हो र शेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्ने पनि हो । हामीले यो मर्जरको समझदारीमा तेस्रो पक्ष (अर्को बैङ्क तथा वित्तीय संस्था)सँग पनि मर्जरमा जान सक्ने बुँदा पनि राखेका छौं । हामी त्यसका लागि पनि सघन छलफलमा छौं । अहिले नै निर्णयमा पुगिनसकेको भए पनि केही दिनमै त्यसबारे निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ । त्यसो भयो भने हामी तेस्रो पक्षलाई पनि समाहित गरेर मात्रै एकीकृत कारोबारमा जान्छौं । तेस्रो पक्ष भनेको कुनै वाणिज्य बैङ्क पनि हुन सक्छ र विकास बैङ्क पनि हुन सक्छ ।
गाभिन लागेका संस्थामध्ये केही त सञ्चित घाटामै चलेका छन् । केन्द्रीय बैङ्कले समस्याग्रस्त भनेर व्यवस्थापन लिएको बैङ्कले त्यस्ता कमजोर संस्थालाई लिएर अघि बढ्न गाह्रो पर्दैन ?
हामीले सबै बैङ्कको वित्तीय अवस्था हे¥यौं । विकास बैङ्क भए पनि उहाँहरूको वित्तीय अवस्था राम्रै छ । हामीसँग गाभिन इच्छुकमध्ये एउटा संस्थामात्रै सञ्चित घाटामा छ । यसलाई लिएर अघि बढ्न सकिन्छ । शेयर स्वाप रेशियो तय हुँदा घाटाको सम्बोधन हुन्छ । घाटा समायोजन भइसकेपछि एकीकृत कारोबारमा त्यसले असर पार्दैन ।
धेरै वाणिज्य बैङ्कहरूले आफ्नो अस्तित्व मेटिनुहुन्न भन्ने धारणा लिएको देखिन्छ । त्यसैले, उनीहरू साना संस्थालाई जोडेर अघि बढ्ने दिशामा छन् । तपाईंहरूले पनि आफ्नो अस्तित्व नमेटियोस् भन्ने चाहनुभएको हो ?
अस्तित्व पनि एउटा विषय हो । तर, मुख्य कुरा शेयर स्वामित्व विविधीकरण नै हो । यहाँ राष्ट्र बैङ्क आफै सञ्चालकको भूमिकामा छ । केन्द्रीय बैङ्क सधैं यहाँ बसिरहन सक्दैन । उसको आफ्नै काम छ । यसबाहेक तोकिएको समयमा न्यूनतम पूँजी कायम गर्नु पनि अर्को उद्देश्य हो । हामीले यो वर्षको नाफाबाट दिइने लाभांश र मर्जरबाट ७ अर्ब पूँजी पु¥याउने भनेका छौं । मर्जरविना त्यो सम्भव छैन । हामी आफ्नो नाफाको पूँजीकरण गरेर पनि त्यो सम्भव छैन । हकप्रद शेयर निष्कासनको बाटो हाम्रा लागि असहज छ । किनकि, हकप्रद शेयरले शेयर स्वामित्वका विविधीकरण गर्ने लक्ष्यलाई सहयोग गर्दैन । त्यसकारण इच्छुक भएर आएका संस्थासँग मर्जरमा जाने सहमति बनेको हो । हामीले वाणिज्य बैङ्क नै भनेर कुर्दा हाम्रा योजना पूरा गर्न कठिन हुने देखिएकाले अघि बढेको हो ।
एनसीसीको ‘मेरो बैङ्क’ भन्ने पुरानो ब्राण्डिङ पछिल्ला वर्षमा केही धमिलिन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ ब्राण्डिङ गर्ने राम्रो अवसरलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?
हाम्रो मर्जर सहमतिमा बैङ्कको नाम क्रेडिट एण्ड कमर्श नै राख्ने भनिएको छैन । सहमतिबाट नाम परिवर्तन गर्ने भनिएको छ । नयाँ ब्राण्डबाट अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ भन्नेहरू पनि छन् ।
मर्जरपछि पनि एनसीसीकै समूह हाबी हुने अवस्था त देखियो नि ?
विगतमा एउटा समूहको शेयर स्वामित्व अधिक भएकाले सञ्चालनमा समस्या आयो भनेर राष्ट्र बैङ्कले सञ्चालक समितिमाथि कारबाही गरेको हो । त्यही शेयर स्वामित्व विविधीकरण गर्नकै लागि मर्जर अघि सारिएको हो । मर्जरपछि नयाँ सञ्चालक समिति आउँछ । त्यसमा कुनै समूह हाबी हुने भन्ने रहँदैन ।
बैङ्कको वित्तीय विवरण हुने भयो भने पहिलेभन्दा धेरै सुध्रिएको छ । हामीले आव २०६८/६९ मा ५ प्रतिशतबाट प्रतिफल दिन शुरू गरेको हो । २०६९/७० र २०७०/७१ मा गरेर ३८ प्रतिशत बोनस शेयर दियौं । २०७१/७२ को नाफाबाट पनि १६ प्रतिशत बोनस शेयर दिने भनेर सञ्चालक समितिले निर्णय गरिसकेको छ । अहिले बैङ्कको वित्तीय अवस्था राम्रो भएको छ । अब नयाँ सञ्चाल समिति आइसकेपछि पुराना विवाद रहँदैनन् ।
मर्जरपछि शेयर स्वामित्वमा कस्तो फेरबदल आउँछ ?
चारओटा विकास बैङ्कहरू आइसकेपछि हाम्रो चुक्ता पूँजी ५ अर्ब ६० करोड पुग्छ । यसपछि पनि हामीले नाफाको पूँजीकरण गरेर र अर्को संस्थासँग मर्जर गरेर २०७४ असारमा ८ अर्ब पूँजी पु¥याउँछौं । संस्थागत स्वामित्वको कुरा गर्ने हो भने एनसीसी एक्लै र अरू चारओटा विकास बैङ्कको करीब बराबर पूजी जोडिनेछ ।
व्यावसायिक अवस्थाचाहिँ कस्तो हुन्छ ?
गत असारको तथ्याङ्क हेर्दा सबै बैङ्कको जोडेर करीब ४५ अर्ब निक्षेप र ३१ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ । शाखा ९२ ओटा हुन्छन् । त्यसमध्ये ओभरल्याप (एकै ठाउँमा धेरै ओटा) भएकालाई गाभ्दा पनि ७२ ओटा शाखा रहन्छन् । त्यसले गर्दा व्यावसायिकता विस्तारमा ठूलो सहयोग पुग्छ ।
तर, मर्जरपछि कतिपय संस्थामा कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत विषयमा निकै समस्या देखिएको छ । तपाईंले कस्तो योजना बनाउनुभएको छ ?
पोष्ट मर्जरमा मानव संसाधन व्यवस्थापन नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । त्यसका लागि अलि बढी ध्यान दिने हो भने व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । पाँचओटा संस्था मर्ज हुँदा कर्मचारीको कार्य क्षमता (इफिसियन्सी) सुधार गर्न तालीम र वृत्ति विकासको क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्छ । मर्जरपछि ९ सयजति कर्मचारी हुन्छन् । त्यसमध्ये सबैले कामलाई निरन्तरता दिन्छन् भन्ने विश्वास पनि लिनुहुँदैन । हामीले आकर्षक अवकाश योजना पनि ल्याउने तयारी गरेका छौं ।
दोस्रो वर्षमा रू. १ अर्ब बोनसमार्फत पुर्‍याउने भन्नुभएको छ । तर, मर्ज हुन लागेका संस्थाहरूको व्यावसायिक अवस्था हेर्दा त्यो सम्भव देखिँदैन नि ?
मर्जरपछि व्यवसायमा हुने विस्तारले हामी त्यो लक्ष्य भेट्टाउन सक्छौं भन्ने लागेको छ । तेस्रो पक्षलाई समावेश गर्न सकियो भने सहजै पूँजी वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं । त्यसैले, अर्को संस्थासँगको छलफललाई पनि अघि बढाइएको हो । त्यसो भएन भने नाफाको पूँजीकरण अर्को उपाय हुन सक्छ । त्यसपछि पनि सकिएन भने चाहिँ अन्त्यमा हकप्रद शेयर पनि विकल्प हुन सक्छ । हकप्रदले शेयर स्वामित्व विविधीकरण त हुँदैन नै, व्यवसायको दायरा पनि बढ्दैन । त्यसकारण यो हाम्रा लागि अन्तिम विकल्प हो ।
तपाईंहरूको खराब कर्जाको दर पनि तुलनात्मक रूपमा बढी छ । त्यसले कत्तिको असर पार्छ ?
अहिले धेरै संस्थाको निष्क्रिय कर्जाको दर राष्ट्र बैङ्कले तोकेभन्दा कम नै छ । अहिले नै हामीले खराब कर्जा घटाउन साझेदार संस्थाहरूलाई आग्रह गरेका छौं । त्यसले उनीहरूलाई फाइदा पुग्छ । खराब कर्जा घट्दा उनीहरूको नेटवर्थ राम्रो देखिन्छ । त्यसले शेयर स्वाप रेशियोमा पनि उनीहरूले लाभ पाउँछन् । निष्क्रिय कर्जा घटाउने अभियान झन् तीव्र पारिसकिएको छ । अर्को कुरा, कुनै संस्थाको खराब कर्जा धेरै देखियो र त्यसलाई स्वीकार गर्न अरू साझेदारहरू तयार भएनन् भने पूर्वसहमति कायम राखिरहनुपर्ने बाध्यता छैन ।
राष्ट्र बैङ्कचाहिँ कहिलेसम्म बस्छ ?
उहाँहरूको टीओआरमा धेरै काम भइसकेका छन् । अब शेयर स्वामित्व विविधीकरण गर्ने भन्ने दायित्व बाँकी नै छ । स्वामित्व विविधीकरण भएमा पुरानो विवाद दोहोरिँदैन भन्ने विश्वास छ । त्यस्तो लिखित जिम्मेवारी नटुङ्गिई राष्ट्र बैङ्कले एनसीसीको व्यवस्थापन छोड्दैन ।
बैङ्कमा भर्खरै सीईओ पद खाली भएको छ । त्यसमा कस्तो तयारी भएको छ ?
त्यो काम सञ्चालक समितिले गर्ने हो । राष्ट्र बैङ्कले पनि त्यो काम बैङ्कका साहुजीहरूले गर्ने काम हो भनेर छोड्नुभएको छ ।
मर्जरमा जान लागेका धेरैजसो संस्थाको पू“जी परिचालन कमजोर देखिन्छ । कर्जा निक्षेप अनुपात पनि तुलनात्मक रूपमा बढी नै छ । अब पू“जी परिचालनमा कस्तो रणनीति लिनुहुन्छ ?
गाभ्ने–गाभिने काम सकिएपछि शाखा सञ्जालको प्लेटफर्म बढ्छ । हिजो सानो पूँजी लिएर चलेका विकास बैङ्कका शाखाहरूको हैसियत एक्कासि ठूलो हुन्छ । त्यसले हामीलाई ग्रामीण क्षेत्रका साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई)मा तीव्र गतिमा लगानी बढाउन बाटो खुल्छ । हामी एसएमईमा आक्रामा बजार विस्तारको रणनीति लिन्छौं । हाम्रो उद्देश्य ठूला परियोजनाभन्दा साना उद्यमालाई बढी प्राथमिकता दिने र त्यसमार्फत व्यवसायको विस्तार गर्ने नै हो । वर्तमान राजनीतिक समस्या कालान्तरसम्म लम्बिदैन । यो छिट्टै अन्त्य हुन्छ र आर्थिक गतिविधि बढ्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । त्यो बेलासम्म हामीले आफ्नो पूँजी आधारलाई बलियो बनाउन सक्यौं भने व्यावसायिक विस्तारमा आक्रामक गतिले अघि बढ्न सहयोग पुग्छ ।
अहिलेको मर्जर कहिलेसम्म सकिन्छ त ?
हामीले अहिलेको तयारीअनुसार २०७३ जेठ २ गतेबाट एकीकृत कारोबार शुरू गर्ने गरी प्रारम्भिक कार्यतालिका बनाएका छौं । तेस्रो पक्षसँग पनि मर्जरमा जानुपर्ने भयो भने त्यो मितिमा हेरफेर हुन सक्छ । हामीले सकभर चाँडो मर्जर प्रक्रिया सम्पन्न गर्न चाहेका छौं ।
एनबी समूहको कर्जा उठाउने कामचाहिँ कता अलमलियो ?
प्रवद्र्धकसँग सम्बन्धित जम्मा दुईओटा कर्जा असुल गर्न बाँकी छ । त्यसलाई पनि हामीले बोलकबोलमार्फत धितो विक्री गर्न खोज्यौं । तर, बोलकबोलमा कोही पनि सहभागी नभएपछि हामीले धितोलाई आफ्नो स्वामित्वमा सार्ने प्रक्रिया शुरू गरिसकेका छौं । बैङ्कको स्वामित्वमा आइसकेपछि हाम्रो खराब कर्जा त घट्छ, तर नाफा बढ्दैन । हामी छिट्टै उक्त सम्पत्ति विक्री गरेर नाफामा सुधार ल्याउँछौं । पुस मसान्तमा धितो सकार्ने भनिएको छ । त्यति नभए पनि माघ पहिलो साता धितो बैङ्कको स्वामित्वमा आइसक्छ ।